रोचक जानकारी Archives - TV Annapurna
फेसबुकमा कतिपयले अरुको नाममा वा हुदै नभएको नाममा फेक एकाउन्ट बनाएर चलाईरहेका हुन्छन् । तर अब भने उनीहरुलाई गार्हो हुने भएको छ । फेसबुकमा फेक एकाउन्ट समाप्त पार्न कम्पनीले नयाँ कदम चालेको छ । नयाँ कदमपछि फेक एकाउन्टबाट कुनै पनि पेजको म्यानेज गर्न कठिन हुनेछ । विश्वकै सबैभन्दा ठुलो सामाजिक सञ्जाल कम्पनी फेसबुकले आफ्नो प्लेटफार्ममा फेक एकाउन्टमाथि लगाम कस्न नयाँ कदम उठाएको हो । कम्पनीले अमेरिकामा ठुलो संख्यामा फलोअर्स रहेका युजरहरुसँग एकाउन्टको आधिकारिकता पुष्टि गर्न भनिसकेको छ । फेसबुकले भनेको छ, हामी ती मानिससँग पेज पब्लिसिङ अथोराइजेसन सुरू गर्दैछौँ, जो…
शरीरको उचाइको अनुपातमा हुनुपर्ने औसत तौलके तपाईको तौल घटाउनु छ? उपायहरु भन्दा शारीरिक तौल बढी हुनुलाई मोटोपन भनिन्छ । मोटोपनबाट रोगहरु उत्पन्न हुन्छन् । मोटोपन घटाउन सकेको खण्डमा उच्च रक्तचाप, मधुमेह, उच्च रक्तकोलेस्टेरोल, हृदयघातजस्ता रोगहरुलाई कम गर्न सकिन्छ । मोटा व्यक्तिहरुले जीवनशैली परिवर्तन गर्दा शारीरिक तौल घटाउने लक्ष्य राख्नुपर्छ । १० भोकै बसेर चाँडो तौल घटाउने प्रयास गर्नु हुँदैन । आज हामीले तपाइहरुलाई केवल सात दिनमा पाँच किलो तौल कसरि घटाउन सकिन्छ भनेर डाइट प्लान लिएर आएका छौं। पहिलो दिन : पहिलो दिनमा हल्का आहार लिनुपर्छ । जसमा केवल…
संसारकै शक्तिशाली राष्ट्रका प्रमुखको सुरक्षा पछिलो समय निकै चुनौती पूर्ण बन्दै गएको छ । बिभिन्न खाले आन्तरिक तथा वाह्य आतंकवादका कारण शक्तिशाली राष्ट्रका प्रमुखको सुरक्षालाई ध्यानमा राखी उनीहरुले चढने गाडीलाई विशेष तरिकाले बनाउन थालिएको छ । उनीहरुले चड्ने कार संसारकै महंगो कार मध्यमा पर्दछ । विश्वमा दिनप्रतिदिन बढ्दै गईरहेको आतंकबादले गर्दा शक्तिशालि देशका राष्ट्रप्रमुखलाई बढी डर हुनेगरेको छ । आतंककारीहरुको निसानामा समेत उनीहरुनै हुनेगरेका छन् । त्यसैले शक्तिशाली राष्ट्रहरुले आफ्नो देशको प्रमुखको सुरक्षार्थ महंगो कारहरु उपलब्ध गराउने गरेको छ । विश्वको सवैभन्दा शक्तिशाली मानिएको अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको सुरक्षाको लागी …
पगानी जोन्डा एचपी बार्सेटा विश्वकै सर्वाधिक महँगो कार भएको छ । यसको मूल्य १३ दशमलव ५ मिलियन पाउन्ड अर्थात् करिब १ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ पर्छ । यो कारलाई १ सय किलोमिटर प्रतिघण्टाको स्पिड लिन ३ दशमलव १ सेकेन्ड मात्र लाग्छ । हालै बेलायतको पश्चिमी ससेक्समा आयोजित गुडवुड फेस्टिभल अफ स्पिड–२०१८ मा उक्त कारको प्रदर्शन गरिएको थियो । पगानी जोन्डाको एचपी बार्सेटामा ७ दशमलव ३ लिटरको इन्जिन छ, जसमा ६–स्पिड गियरबक्स जडान गरिएको छ जसले ७८९ बीएचपी पावर दिन्छ । ३ सय ४६ किलोमिटर प्रतिघण्टा गुड्न सक्ने यो कार कार्बन…
August 11, 2018 August 11, 2018 Annapurna TV
दक्षिण अफ्रिकाको जोहानसबर्गस्थित डिपलुस्ट सहरलाई दुनियाकै खतरनाक सहर भनिन्छ । त्यहाँ महिलाहरुमाथि बलात्कार हुनु सामान्य कुरा हो । हालै बीबीसीसँगको कुराकानीमा उक्त सहरका दुई युवकहरुले आफुले अहिलेसम्म कैयन् महिलाको बलात्कार गरिसकेको डरलाग्दो खुलासा गरे । यसो भनिरहँदा उनीहरुको अनुहारमा कुनै अपराधबोध थिएन । आफ्नो नाम गोप्य राखेका ती युवकले आफ्नो बलात्कार कर्मको कहानी बताएका छन् । उनी भन्छन्, ‘जब महिलाले घरको ढोका खोल्छन् तब हामी घरभित्र घुस्छौँ र आफ्नो चक्कु निकाल्छौँ । महिला चिच्याउन थाल्छिन् । हामीले मार्ने धम्की दिएर चुप गराउँछौँ । अनि ओछ्यानमा लगेर बलात्कार गर्छाैं ।’ ती…
August 11, 2018 Annapurna TV
एउटा अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार ५० करोड डलरभन्दा बढीको सम्पत्ति हुने मानिस अर्बपतिको सूचीमा सामेल हुन्छन्। यदि तपाईँसँग त्यति पैसा भयो भने तपाईँ कहाँ बस्न रुचाउनुहुन्छ? नाइट फ्र्याङ्क एलएलपीले त्यसबारे सन् २००९ देखि जान्ने प्रयत्न गर्दै आएको छ। ‘रियल स्टेट’ तथा परामर्शदाता उक्त एजेन्सीको स्थापना सन् १८९६ मा लण्डनमा भएको हो। सो एजेन्सीको हालैको एउटा अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार ५० करोड डलर बराबरको सम्पत्तिका अधिकांश मालिकहरू उत्तर अमेरिकी महाद्वीपमा बस्छन्। त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी (३१ दशमलव ८ प्रतिशत) अमेरिका र क्यानाडामा बस्छन्। त्यसपछि एशियामा २८ दशमलव १ प्रतिशत र युरोपमा २४ दशमलव ४…
सामान्यतया गर्धनको पछाडीदेखि नितम्बसम्मको भागलाई ढाड भनिन्छ । यही भागमा समस्या भई हुने पीडालाई ढाड दुखाई भनिन्छ । ढाडलाई पनि तल्लो र माथिल्लो भागमा विभाजन गरिएको छ । ढाडको तल्लो भाग माथिल्लो भागको तुलनामा बढी दुख्ने गर्छ । माथिल्लो भागको तुलनामा तल्लो भाग बढी दुख्नुका कारण र यसको उपचार बारे आयुर्वेद डाक्टर काशी खतिवडाको भनाइ यस्तो छ । तल्लो ढाड दुखाई पुरुषको तुलानामा महिलामा बढी हुने गर्छ । यो कुनै ठुलो रोग हैन् तर, सामान्य लापरवाही वा असावधानीले यो समस्या देखिने गर्छ । तल्लो ढाडको दुखाई कम्मर वरपरको भागमा जहाँ…
यो वर्ष अर्बपतिहरुको सूचीमा अर्को रेकर्ड बनेको छ । विश्वभरको अर्बपति हुने महिलाहरुको सङ्ख्यामा उल्लेख्य बढोत्तरी भएको छ । सन् २०१८ मा सबैभन्दा धेरै २५६ जना महिला अर्बपति सूचीमा अटाएका छन् । तिनको सम्पत्तिको कुल योग १० खर्ब अमेरीकी डलर रहेको छ । यो मूल्य अघिल्लो वर्षभन्दा २०% बढी हो । सूचीको शीर्षमा रहेका अधिकाशं महिलाले अंशमा सम्पत्ति पाएको भएपनि एक चौथाई अर्बपति महिलाले भने आफ्नै बलबुतामा सो स्थान बनाएका हुन् । स्वनिर्मित अर्बपति महिलाहरुको सङ्ख्या अघिल्लो वर्ष ५६ बाट बढेर यो वर्ष ७२ पुगेको छ । एलिस वाल्टनले विश्वको…
कुनै पनि कम्पनीको लागी कर्पोरेट जगत्मा नाम बनाउनको लागी सही रणनीतिको आवश्यक पर्छ । यस्तोमा कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सिईओ को मुख्य भूमिका हुन्छ । प्रत्येक सिईओले अनुभव, क्षमता एवम् उत्कृष्ट दक्षताको साथ कम्पनी अगाडी बढाएको हुन्छ । कम्पनीलाई सफलतामा पुर्‍याउनको लागी उसले धेरै चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तोमा उसले पक्कै पनि धेरै तलबको माग गर्दछ । आज हामी विश्वमै सबैभन्दा बढी कमाइ भएका १० सिईओको चर्चा गर्दैछौं । जान्नुहोस् को हुन् तिनीहरू : १ डेभिड जास्लाभ, डिस्कभरी कम्युनिकेसन्स डेभिड एम जास्लाभ डिस्कभरी कम्युनिकेसनका सिइओ हुन्। सन् १९६० न्यूयोर्कमा…
हरेक मानिससँग आआफ्नै बानी तथा स्वभावहरु हुन्छन् । त्यसकारण प्रत्येक मानिसमा फरकपना पाइन्छ । मानिसका स्वभाव तथा बानीहरु केही मिल्दाजुल्दा भएपनि सबै बानी एउटै भएका मानिस पाउन मुस्किल नै पर्दछ । कसैका बानी कसैलाई अनौठो लाग्न सक्छ । विश्वमा धेरै किसिमका मानिस छन्, कोही मानिस चर्चित छन् भने कोही मानिस सामान्य छन् । चर्चित मानिसको सफलतामा एउटा कारण अवश्य लुकेको हुन्छ । आनीबानी तथा स्वभावबाट मानिसको जीवनको बाटो निर्धारण पनि हुन्छ तसर्थ यहाँ विश्वका चर्चित मानिसका अनौठा बानीहरुको बारेमा जानाकारी गराइएको छ जसबाट हामीले केही न केही असल बानीहरुको अनुकरण…